China Truck Side Mirror PK9438 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Fiara fitateran'ny kamiao PK9438
Ny fitaratra miverimberina dia iray amin'ireo singa fiarovana lehibe amin'ny vatan'ny fiara.PK9438 dia mety ho an'ny andian-tsarimihetsika MP3 an'ny Mercedes Benz. Izy io dia ampiasaina hijerena ny toetoetran'ny lalana ao ambadiky ny fiara sy ny mpamily hijerena ny vatan'ny fiara mandritra ny fizotran'ny fiara. Ny fitaratra fitaratra misy antsika dia fitaovana vaovao.
Ny fitaratra miverimberina dia iray amin'ireo singa fiarovana lehibe amin'ny vatan'ny fiara.PK9438 dia mety ho an'ny andian-tsarimihetsika MP3 an'ny Mercedes Benz. Izy io dia ampiasaina hijerena ny toetoetran'ny lalana ao ambadiky ny fiara sy ny mpamily hijerena ny vatan'ny fiara mandritra ny fizotran'ny fiara. Ny fitaratra fitaratra misy antsika dia fitaovana vaovao. Ny mpamatsy antsika dia tokony ho ISO9001 mahafeno fepetra. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpamokatra mahay TS16949. Ny solomaso dia nampihatra ny fitaovana iraisam-pirenena mandroso sy miondrika fampiasa vita amin'ny vera. Ny rafitra famolavolana telo-maoderina maoderina sy ny fitaovana milina CNC mandeha ho azy dia ampiasaina amin'ny famokarana vokatra. Ny ankamaroan'ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena vahiny ary nankafy tsena mampanantena ho an'ny kalitao avo lenta, vidin'ny fifaninanana ary serivisy tsara. Fahafinaretana ny manonona ny vidiny mirary indrindra ary manolotra anao ny serivisy tsara indrindra. Ny vokatray dia eken'ny besinimaro atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miova tsy tapaka. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha izahay avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Mifandraisa aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny tsirairay!
FAMPIHARANA Andian-tsarimihetsika MP3 an'ny mpilalao an'i Mercedes Benz
Teo aloha: Fiara fitateran'ny kamiao PK9440
Manaraka: Tratry ny fitaratry ny kamio PK9468
Fiara fitateran'ny kamiao PK9510